Mampizarazara ny bridging: inona no azon'ny Ahimsa (Nonviolence) atolotra? - Fihaonambe virtoaly - Fanentanana manerantany ho an'ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana
Mampizarazara ny bridging: inona no azon'ny Ahimsa (Nonviolence) atolotra? - Fihaonambe virtoaly
Oktobra 8 - Oktobra 10
« Paulo Freire sy ny fahaveloman'ny olona tamin'ny taonjato faha-roapolo (andiany webinar)
Fihaonana nasionaly momba ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana - Kolombia »
Antsoy amin'ny Proposals
Fe-potoana farany fandefasana Proposal: Aogositra 23, 2021
Ahimsa Center ao amin'ny College of Letters, Arts and Social Sciences ao Cal Poly Pomona dia manasa tolo-kevitra fampisehoana ho an'ny valan-dresaka virtoaly marolafy momba ny Bridging Divides: Inona no azon'i Ahimsa atolotra?
Famaritana ny fihaonambe
Miaina amin'ny vanim-potoanan'ny fizarazarana isika. Ary mitombo amin'ny sehatra rehetra izy ireo- ara-tsosialy, politika, toekarena, foko, fivavahana ary ekolojika. Na dia tsy vaovao tanteraka aza ireo fizarazarana ireo, ny hamafiny sy ny fiatraikany dia mametraka fanamby misy. Ny fizarazarana ara-poko sy ara-poko mihamitombo haingana dia manimba ny endrik'ilay fiarahamonintsika marobe. Ny fahasamihafana ara-politika mihalalina dia mampidi-doza amin'ny foto-kevitra hoe "firenena iray, tsy azo zarazaraina." Ary raha isika no firenena manankarena indrindra eto an-tany, ny tsy fitovizan'ny toekarena dia manimba ny firafitry ny fiarahamonintsika miaraka amin'ny fahantrana sy ny tsy fananan-tokantrano miha-mitombo. Ireo fizarazarana ireo dia hararaotina amin'ny tanjona politika izay manitatra ny fisaratsarahana sy manimba ny faran'ny demokrasia eto amintsika. Ny mahasadaikatra kokoa dia ny "fizarazaran-divay" ankehitriny ao anatin'ny areti-mandringana izay mandrahona ny fahasambaran'ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny.
Na eo aza ny ezaka ataon'ny fikambanana marobe sy olona an-jatony izay niasa tamin'ny fampitana teti-dratsy isan-karazany, ny fizarazarana dia mitohy miantraika amin'ny fitomboan'ny isan'ny olona.
Ity valan-dresaka virtoaly ity dia hijery ny anjara andraikitra sy ny maha-zava-dehibe ny ahimsa amin'ny fampifandraisana ireo fizarazarana toy izany.
Ny Ahimsa na ny tsy herisetra dia takatra matetika amin'ny hoe TSY IZAO, fa tsy herisetra izany. Ity kaonferansa ity dia hifantoka amin'ny ahimsa amin'ny lafiny IS. Ahimsa dia tsy misy herisetra miorim-paka amin'ny fangorahana sy fiaraha-miory, tsy fahatahorana ary famelan-keloka, fankasitrahana ary fahalalahan-tanana. Mahatonga ny fahalalam-pomba sy ny fahatokisana izany, mampiroborobo ny fahatsapana ny maha-iray sy ny fihavanana.
Araka izany, ahimsa ve afaka ho fitsipika mitarika amin'ny fampifangaroana ny fizarazarana, amin'ny fampiroboroboana ny fampidirana ary hanamafisana ny fototry ny fiarahamonina misy kolontsaina sy foko maro samihafa? Afaka mitondra fahatsapana firaisankina ao amin'ny efitrano fiankinana, ny fiarahamonina ary ny toeram-piasantsika ve izany?
Tolo-kevitra: fifantohana sy sehatra
Manasa ny tolo-kevitra hisolo tena ny fomba fifehezana maro izahay izay manazava ny anjara andraikitra sy ny maha-zava-dehibe ny ahimsa amin'ny fametahana sy fanovana ireo fizarazarana. Ny faritry ny kaonferansa dia misy lohahevitra rehetra mifandraika amin'ny toetra tsara ahimsa amin'ny tetezana sy / na fanovana ny fizarazaran-karazany. Ny lohahevitra fampisehoana dia mety haka lesona avy amin'ireo ohatry ny ahimsa ara-tantara toa an'i Gandhi, King, Chavez, ary ireo hafa izay nampiasa tsy herisetra mba handresena ny fisaratsarahana sy hamoronana firaisan-kina.
Ny valan-dresaka koa dia manasa famelabelarana momba ny andraikitry ny fanabeazana tsy misy herisetra / fanabeazana ny fandriam-pahalemana amin'ny fikolokoloana fahatsapana ny maha-iray, ny fisakaizana ary ny fiaraha-miory mba hamoronana fahatakarana tsara kokoa amin'ireo mpianatra nalaina avy amin'ny fiaviana samihafa.
Fandaharana fihaonambe virtoaly (Tentative misy fanitsiana kely azo atao):
Zoma 8 Oktobra 4: 00-6: 30 hariva PDT
Sabotsy 9 Oktobra 10: 00-12 mitataovovonana; 1: 00-3: 00 pm PDT
Alahady 10 Oktobra 10: 00-12 mitataovovonana; 1: 00-3: 00 pm PDT
Ny mpihaino antsika amin'ny fihaonambe dia samy hafa: mpampianatra sy mpianatra eny amin'ny oniversite, mpampianatra K-12, mpitantana orinasa ary matihanina hafa, ary mpikambana ao amin'ny fiarahamonina lehibe kokoa.
Alefaso azafady amin'ny alàlan'ny mailaka sombin-teny 250-300 amin'ny lohahevitry ny famelabelaranao mifanaraka amin'ny famaritana ny fihaonambe miaraka amin'ny mombamomba matihanina pejy iray (mitovy amin'ny fampiraisana teny) amin'ny alatsinainy 23 aogositra.
Ireo tolo-kevitra dia hojerena rehefa avy miditra izy ireo. Ireo mpanoratra ny tolo-kevitra mahomby dia hahazo fampandrenesana amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny 10 septambra. Ny fandefasana dia tokony hanana fahamatorana ara-tsaina sy halaliny nefa tsy mitaingina teknika na jargon.
Ho an'ny fanolorana na fanontanina, mailaka amin'i: Dr. Tara Sethia <[email voaaro]>
Oktobra 2, 2022
Oktobra 2, 2023